Wiil Sadex Maalin aroos ahaa oo lagu dilay magaalada Muqdisho
You are at:Home»Somali News»Wiil Sadex Maalin aroos ahaa oo lagu dilay magaalada Muqdisho
Askari katirsan ciidanka dowlada Soomaaliya ayaa shalay Isgooska Taleex ee magaalada Muqdisho waxa uu ku dilay wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeesanayay mootada loo yaqaan Bajaajta.
Sida aan Wararka ku helnay askariga dilka geestay iyo Wiilka Bajaajlaha ahaa oo lagu magacaabayay C/waaxid Jibriil Afrax ayaa waxaa dhax maray muran la sheegay in uu sababay gacan ka hadal.
Askariga ayaa la sheegay in uu toogtay wiilka dhalinyarada ah ee muranka dhax maray, waxaana askariga dilka geestay la sheegay in uu si deg deg ah uga baxsaday goobta uu ku dilay wiilka Bajaajlaha ahaa.
C/waaxid Jibriil Afrax ayaa eheladiisa sheegeen in mudo sadex maalin ah uu aroos ku jiray , waxa uuna shalay usoo baxay sidii uu nolol maalmeedkiisa usoo dhacsan lahaa uguna shaqeysan lahaa mooto bajaajta.
Dilkan argagax leh ayaana noqday mid uur kutaalo iyo murugo badan ku reebtay qoyska wiilka la dilay iyo gabadha uu todobada kula jiray, waxa ay sidoo kale dhacdadan naxtinta leh noqotay mid si weyn looga hadal hayo baraha bulshada.
Ciidanka dowlada Soomaaliya ayaa joogto ka dhigtay dilalka ay u geestaan dadka shacabka gaar ahaan dhalinyarada mooto bajaajta ku shaqeesata, waxaana inta baxsada askarta dilka u geesata dhalinyarada bajaajta ku shaqeesata.